Izizalwane zeZimbabwe Zithola Ulwazi Oluphezulu Lokuthuthukisa Uzulu
Lezi ngezinye izizalwane ziZimbabwe ekade ziseMelika
WASHINGTON DC — Izizalwane ze Zimbabwe ezinhlanu ezikade ziseMelika okwenyanga ezine kuhlelo lwe Community Solutions oluphethwe lugatsha lukahulumende lobudlelwano lamanye amazwe womhlaba lumanyene lenhlanganiso ye International Research and Exchange Board zibuyele ekhaya ngoLwesine sezihlome ngolwazi olulakho ukunceda uzulu lapho ezidabuka khona.
Izizalwane lezi zigoqela uNkosikazi Precious Phiri owenhlanganiso ye Africa Center for Holistic Managament, uNkosazana Nothando Mpofu we Radio Dialogue labanye abathathu abakunhlanganiso zikazulu eMutoko lakwezinye indawo.
Bathi bafunde okunengi okuhambelana labakwenza ekhaya njalo bakhangele ukuthi bazakwenza inhlelo ezilohlonzi lapho abasebenza khona.
Bancome kakhulu ulwazi abaluthole kwele Melika besithi sokubavule ingqondo ngokudlelana kukazulu, uhulumende lenhlanganiso ezizimele zodwa.
Omunye wabakade bekuhlelo lolu uNkosazana Godess Bvukutwa owe Catholic Commission for Justice and Peace unikwe isicoco sokuphuma le-Project Proposal enhle ukwedlula abanye bakhe abangamatshumi amahlanu lantathu – 53 abakade bekulolu hlelo.
Ukhangelelwe ukwenza akubhala phansi kuproject proposal ekhangelane labesifazane edolobheni le Chinhoyi.
UNkosikazi Phiri othi ujabule okwamagama ukuthola ulwazi olujulileyo lokukhuthaza uzulu ukuthi azithuthukise.